Lego Star Wars 75315 Imperial Light Cruiser အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
26 / 06 / 2021 03 / 08 / 2021 ရော့ Paton 2414 Views စာ0မှတ်ချက် 75315 Imperial အလင်း Cruiser, Baby yoda, dune မျက်နှာ, အမှောင် Trooper, Fennec Shand, Grogu, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, Moff ဂိဒေါင်, reviews, အဆိုပါ Mandalorian
75315 Imperial အလင်း Cruiser စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Lego Star Wars ၎င်း၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်တန်ဖိုးကြီးလွန်းသောကြောင့်လျစ်လျူရှုခံထားရနိုင်သည်။
၎င်းသည် ၂၀၂၁ နွေရာသီ၏အကြီးမားဆုံးနှင့်ဈေးအမြင့်ဆုံးအရာဖြစ်နိုင်သည် Lego Star Wars ထုတ်ကုန်များ၊ 75315 Imperial အလင်း Cruiser အနည်းဆုံးပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်အပေါ်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်သတ်မှတ်ချက်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်မည်သည့်အရာကဆန့်ကျင်နေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ Lego Star Wars မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဆောင်ပုဒ်။
ပြီးတော့ယှဉ်ပြိုင်မှုဟာဒီပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးစျေးနှုန်းအလွန်အမင်းကြီးလွန်းခြင်းကြောင့်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းနေမှာပါ။ ၎င်းတွင်အလွန်အမင်းနှစ်သက်ဖွယ်အသေးအဖွဲပုံစံများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤအစုကိုတတ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ငွေအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်မှာအဆိုပါပိုက်ဆံသည်တစ်ဒါဇင်ထက်ဝက်ခန့်ကိုမဖြုန်းတီးရန်နှင့်စရိတ်သက်သာရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ Lego Star Wars minifigure ပုံစံဖြင့်အကြီးအများနှင့်ဇာတ်ကောင်အသစ်များကဲ့သို့သောတစ်ချိန်တည်းတွင်ထုတ်လွှတ်ခြင်းအစုံများနှင့် Lego သေးငယ်ပေမယ့်အားလုံးပိုပြီးချက်ချင်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအစုံ။
တိုတိုပြောရရင်, 75315 Imperial အလင်း Cruiser ပထမဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ် Lego Star Wars ကံကောင်းထောက်မသောအနေအထားရှိသူများအနေဖြင့်အသစ်ထုတ်လွှတ်သည့် (သို့မဟုတ်အားလုံးပင်လျှင်) အချို့ကို ၀ ယ်ယူနိုင်မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဒီနွေရာသီတွင်တက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ် - မဖြစ်သင့်သော်လည်း၎င်းသည်ပထမ၊ ဒုတိယ၊ သင်တည်ဆောက်မည့်တတိယမြောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်အစုတခုဖြစ်ပြီး BrickLink သည်ထိုအသေးစားဓာတ်ပုံများကိုလုံခြုံရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါသလော။
theme: Lego Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75315 Imperial အလင်း Cruiser ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 149.99 / $ 159.99 / € 159.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,336 အသေးစားပုံများ: ၅ (ပေါင်း Baby Yoda)
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ကျွန်တော်တို့အဲဒီမေးခွန်းကိုမဖြေဝံ့ကြဘူး။ ကိုယ်ပိုင်အတွက် set ကိုယူခြင်း, 75315 Imperial အလင်း Cruiser တစ်ဦးမက Lego အများကြီးဝေဖန်ခံထိုက်ကြောင်းမော်ဒယ်။ ၎င်းသည်အရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာကိုအတော်လေးကျွမ်းကျင်စွာပြုပြင်သည် Lego အသေးစား TIE တိုက်လေယာဉ်များပါ ၀ င်သည့်တိကျသောအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအပြင် (အပြင်ဘက်မှထုတ်လွှတ်ရသောပျော်စရာယန္တရား) သာမကကြီးမားသောအတွင်းပိုင်းအပြင်နေရာနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုများစွာပါ ၀ င်သည့်အတွင်းပိုင်းကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ကထင်ရှားနှင့်အဆိုပါ Mandalorian အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်အဖြစ်။
Imperial light Cruiser သည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည် Star Wars သူပုန်များသည် Star Destroyer ၏ သေးငယ်ပြီး မိုဘိုင်းဗားရှင်းအဖြစ် The Mandalorian တွင် တိုက်ရိုက် လှုပ်ရှားမှုပုံစံဖြင့် ပွဲဦးထွက်မပြသမီတွင် အဓိက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Moff Gideon ၏ ပင်မအကြွင်းအကျန်များအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမုဒ်နှင့် ၎င်း၏ Imperial အကြွင်းအကျန်များအတွက် မိုဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် သူပုန်များ။ Gideon သည် Din Djarin ကို ခြေရာခံပြီး Tython ၏ လေထုအတွင်းမှ Razor Crest ကို ဖျက်စီးရန် Gideon သည် light cruiser ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်္ဘောသည် Stromtroopers တပ်ဖွဲ့များကို ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တင်ဆောင်နိုင်သော Imperial သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောများ၏ နေအိမ်ဖြစ်ပြီး Dark Troopers ၏ စမ်းသပ်ဆဲယူနစ်တစ်ခုကိုလည်း ထားရှိခဲ့သည်။
ရာသီ2အတွက်ဇာတ်လမ်း၏အထွation်အထိပ်များအတွက်တည်နေရာအဖြစ် (နှင့်သောအထူး cameo Lego Star Wars အဖွဲ့သည်သူတို့အစုကိုမပြီးမီသတိမပြုမိခဲ့ကြဘဲသင်္ဘောသည်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သဘာဝပါဝင်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် Lego Star Wars ထုတ်လွှတ်မှုလှိုင်းတံပိုးနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရန်အရန်အဖြစ် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
Mandalorian တွင်၎င်းသည်ကောင်းကင်နှင့်အာကာသထဲတွင်ထင်ရှားသောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ Mando, Boba Fett နှင့်အခြားသူများကိုတိုက်ခိုက်သောအခါအရွယ်အစားနှင့်စွမ်းအားကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ သူပုန်များအတွက်လည်း၎င်းအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်သင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်၎င်းထက်ပိုပြီးကြိုဆိုခြင်းအပြင် Lego Star Wars စုဆောင်းမှု။ အတိတ်၏ပိုကြီးသော Star Destroyer အစုံများရရှိထားသည့်အတိုင်းတူညီသောအရေအတွက်ကိုယူခြင်းသည်လည်းဒီဇိုင်းအဖွဲ့အား၎င်းတို့ထက်ပိုမိုသေးငယ်သည့်သင်္ဘောများထက်ပိုမိုသေးငယ်သည့်သင်္ဘောများကိုပိုမိုဖမ်းယူနိုင်ရန်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်။
အပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းပိုင်းရှိအရာနှစ်ခုလုံးတွင်၊ 75315 Imperial အလင်း Cruiser ကယ်တင်။ ခရုဇ်၏ထူးခြားသော၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံသဏ္aာန်ကိုအနည်းငယ်မျှဖြင့်ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်သည် နည်းပညာအတွင်းပိုင်း -frame ဆောက်လုပ်ရေး။ မီးခိုးရောင်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်သည်မော်ဒယ်လ်တွင်ပြန်ဖွင့်ထားသည့်သိမ်မွေ့သောထောင့်များကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်သင်၏မျက်လုံးသည်သင့်ရှေ့မှောက်ရှိစစ်မှန်သည့်သဘာဝကိုအလွယ်တကူလက်ခံရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကားတစ်စီးအနေဖြင့်ကားအပြင်ဘက်တွင်ကစားရန်နေရာများစွာကိုမဖွင့်သော်လည်းဒီဇိုင်နာများသည်မော်ဒယ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာနည်းလမ်းများစွာဖြင့်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သင်္ဘောနောက်ဘက်နှင့်အာကာသထဲသို့လွှတ်ရန်အလို့ငှာရှေ့တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်ပစ်လွှတ်မှုယန္တရား။ ကံမကောင်းတာကသင်ဟာဒီအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ဖို့သင်္ဘော panel တွေပွင့်နေဖို့လိုတယ်။
၎င်းသည်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုသင်္ဘောတံတားသို့သယ်ဆောင်ရန်ထောက်ကူလက်ကိုင်ကိုအသိဥာဏ်ရှိရှိတည်ဆောက်ထားသောအပြင်ဘက်ဒီဇိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောအပေးအယူဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆုံးကို ဦး တည်ရာအနည်းငယ်အလေးမထားဘဲ၊ Lego Star Wars ၎င်းသည်ကြွက်သားအသစ်များကိုပျမ်းမျှအားဖြင့် AFOL ၏လက်မောင်းဖြင့်သက်ဝင်စေပြီးငယ်ရွယ်သောတည်ဆောက်သူများအတွက်ပတ်ပတ်လည်သယ်ဆောင်ရန်လက်နှစ်ချောင်းလိုအပ်သည်။
Cruiser ရဲ့ရှေ့ဆုံးကိုအရင်အတိုင်းအတာများစွာနဲ့ဖွင့်ထားပါတယ် Lego Star Destroyers သည်ကြီးမားသောခေါက် panel တစ်ခုတွင်ဤသင်္ဘောတွင်တံတား၏အသေးစားပုံသဏ္interpretationာန်ကိုအနက်ဖွင့်ရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုပြားလေးခု၊ သိုလှောင်မှုသေတ္တာများနှင့်ဗဟိုစားပွဲခုံသာပါရှိပြီး၎င်းနေရာသည်နေရာချထားရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Mandalorian တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်ပုံစံနှင့်တော်တော်ဆင်တူသည်။ ရာသီ2ဇာတျသိမျး။
75315 Imperial အလင်း Cruiser ဖြစ်ကောင်းမော်ဒယ်၏အပြင်ပန်းနှင့်အတော်လေးစာသားအဘယျသို့အကြားထိုကဲ့သို့သောလျော့ပြေအဘို့ခွင့်ပြုသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများအတွက်အများဆုံးမှတ်သားလောက်သည်ကမှဆွန်း - ရှေ့မျက်နှာစာ။ အခြားနေရာများတွင်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲယင်းကိုရရှိရန်သည် p ထိုက်တန်သည်articular မှတ်စုနှင့်လေးမွတျ။
အဲ့ဒါအပြင် 75315 Imperial အလင်း Cruiser ကြီးမားသောသင်္ဘောတစ်စင်းကိုအပန်းဖြေစဉ်ကစားခြင်းနှင့်ပြသခြင်းအကြားမျှတမှုကိုရှာပါ Lego ပုံစံ။ သို့သော်ထိုသို့သောအခြားအကွာအဝေးနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရှိသည် Lego Star Wars တစ်ချိန်တည်းမှာလွှတ်ပေးခဲ့သည့်သင်္ဘောများနှင့်၎င်းတို့အားလုံးအလွန်အမင်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တကယ့်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
လိုချင်တာသာရှိတော့မယ် 75315 Imperial အလင်း Cruiser minifigure line-up အတွက်တော့သူတို့အယူခံဝင်တာပါ။ ယင်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်၌အနည်းငယ်လွင်ပြင်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည့်နေရာတွင် minifigures သည်အသေးစိတ်၊ အရောင်နှင့်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကနှစ်ခုလည်းဖွယ်ရှိအစုံဤမျှမြင့်မားသောစျေးနှုန်းကြောင့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြသည်။
Moff Gideon, Fennec Shand နှင့် Dark Trooper တို့အားလုံးသည်အထူးသီးသန့်ဖြစ်ပြီးအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအသေးအဖွဲများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာသံခမောက်များအတွက်အလွန်အသေးစိတ်ကျသောထူးခြားသောပုံသဏ္thanksာန်များကြောင့်နောက်ဆက်တွဲနှစ်ခုကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသံလိုက်ခမောက်များသည်ထိုအသေးစားဓာတ်ပုံများကိုအရည်အသွေးနှင့်စစ်မှန်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်city, Fennec အတွက်ပုံနှိပ်လက်နက်နှင့် Dark Trooper များအတွက်ပုံနှိပ်ပခုံး pad ပါအပိုင်းအစနှင့်အတူ။
ထို့အပြင်၎င်းသည်သိမ်မွေ့သောအီးဖြစ်သည်xtra ထိုပခုံးဘောင်အပိုင်းအစကိုမြှင့်တင်ပါ။ ပုံမှန် minifigure ၏မျက်လုံးထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောသံခမောက်ကိုမျက်စိတပ်ထားခြင်းနှင့်အတူတွဲဖက်ထားပါ။ (ထိုခေါင်းကိုအခြားခေါင်းပေါ်တွင် တင်၍ သူတို့၏မျက်လုံးများသည်အပေါက်များကိုမရောက်နိုင်ပါ) Dark Trooper ကိုပေးသည် အသေးစားငxtra ၎င်း၏အသွင်အပြင်အတွက်ဆိုထားပါသည်နှင့်အချို့သောအီးxtra အဘယ်မှာရှိမဟုတ်ရင်အမြင့် Lego Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကဒါကိုမပေးလိုပါဘူး
Moff Gideon ၏သေးငယ်သောရုပ်ပုံတွင်အရောင်နှစ်မျိုးရှိသောအငူနှင့်ပုံသဏ္allာန်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းများပါ ၀ င်ပြီးပုံသဏ္dualာန် Dual-molded နှစ်ခုဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် - နှင့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အခိုင်အမာအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ 75315 Imperial အလင်း Cruiser နှင့်အစုံအတွင်းတကယ်ထူးခြားတဲ့အရာမရှိခြင်း - ဖြစ်ကောင်း မိမိအ hairpiece အတွက်ဒုတိယအရောင် သူ၏မီးခိုးရောင်ဆံပင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်သို့မဟုတ် p ကိုပိုမိုတိကျစွာဖမ်းယူနိုင်မည့်အပိုင်းအသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။artအဆိုပါ darksaber ၏ icular ပုံသဏ္.ာန်။ ဒီ NINJAGO လက်နက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း pack ယခုအချိန်အထိအရောင်ငါးမျိုးဖြင့်လာသည်၊ အနက်ရောင်နှင့်အရောင်တူသောရှည်သောဓါးသည်ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ဆင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
Grogu Cara Dune အတွက်ဒုတိယအသွင်အပြင်လည်းပါ ၀ င်သည် art တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အရ Beskar သံချပ်ကာတွင် Baby Yoda နှင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကို) Ddin Djarin ကိုယ်တိုင်နှင့် Moff Gideon နှင့်သူပြိုင်ဆိုင်သည့်အတိုင်း Beskar လှံဖြင့်ပြည့်နေသည်။
ဤနေရာတွင်ဤသုံးခုပါဝင်မှုကိုဝေဖန်ရန်အနည်းငယ်သာရှိသည် (သင်လူကြမ်းပြုလျှင်သူရဲကောင်းများလိုအပ်သည်) သို့သော် Koska ရိဗ် အသေးစားအသေးစားလေးကရောင်းရတာအမှန်ပဲ 75315 Imperial အလင်း Cruiser ပိုကောင်းတဲ့စုစုပေါင်းအထုပ်, ဒါမှမဟုတ်ပင် unmasked Din Djarin အဖြစ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Mandalorian ၏သံခမောက်လုံးအတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်။ မန်နေဂျာတစ် ဦး အတွက်ပေါင် ၁၅၀ ပေးဆောင်ရပြီးဝမ်ပေါင်မန်ဒိုကိုရဖို့ဆိုပါစို့။
နောက်ဆုံးတွင်တန်ဖိုးမြှင့်အသိကိုမြှင့်တင်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ခံစားခဲ့ရသည့်အံ့အားသင့်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သည် 75315 Imperial အလင်း Cruiser ပြည့်စုံတဲ့အခါ - ငါတို့မျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုလေးတယ်။ သို့သော်ထိုအံ့အားသင့်မှုကအလုံး ၁,၃၃၆ ပုံနှင့်မတူပုံကိုအပျက်သဘောရောင်ပြန်ဟပ်သည် Lego set ကိုသို့သွားပြီ။ ဒါဟာ 800 နီးပါးအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူတစ်စုံ၏အသွင်အပြင်ရှိပါတယ်။ အများကြီး နည်းပညာ အတွင်းပိုင်းရှိတံသင်များ၊ အပြင်ဘက်တွင်မီးခိုးရောင်ပြားကြီးများပြားများ။
၎င်းသည်ဒီဇိုင်းအားလုံးကိုဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လိုအပ်သည့်မှန်ကန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကမ်းလှမ်းသည်အတိုင်းအတာတစ်ခု၏အပြင်ပန်း၌သာမကအခြားတစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းသည်အရွယ်အစားကြီးရန်မလိုအပ်သည့်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်း၌လုံလောက်သောအာကာသနှင့်အင်္ဂါရပ်များရှိပြီး Mandalorian မှယခုအထိမြင်တွေ့ရသောဇာတ်လမ်းအားလုံးကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်နှင့်အပြင်ဘက်တွင်ပြသထားသည့်အရွယ်နှင့်အသေးစိတ်အကြားမျှတသောချိန်ခွင်၌ရှိသည်။
သို့သော်ပေါင် ၁၄၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၅၉.၉၉ / ယူရို ၁၅၉.၉၉ အထိအားသွင်းခြင်းသည်သင်ကျန်ရှိနေသောမော်ဒယ်နှင့်မကိုက်ညီဘဲနေဆဲဖြစ်ပြီးလက်တွေ့တွင်၎င်းသည်အသေးစားပုံရိပ်များ၏အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် - partအထူးပြုလုပ်ရန်အထူးတစ်ကြိမ်ဖို့လိုအပ်သည့်နှစ်ခု။
Wonky- ပုံနှိပ် -alorian ။
လက်ဝဲ - ဤမိတ္တူတွင်ပါ ၀ င်သော Mandalorian ၏သံခမောက်အတွက်ပုံနှိပ်ပါရှိသည် 75315 Imperial အလင်း Cruiser နည်းနည်းဝေးတယ်
စျေးကဘယ်မှာလဲ 75315 Imperial အလင်း Cruiser unstuck လာပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်£ ၁၀၀ မှပေါင် ၁၂၀ အကြားရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိုတစ်ခုလုံးကိုအကြံပြုရန်အတွက် set နှင့် minifigure လိုင်းများအလုံအလောက်ရှိလိမ့်မည်။artedly ။ ငါတို့မူကား၊ Lego Star Wars'' ၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေရာသီရဲ့ကျန်ထုတ်လွှတ်မှုတစ်လျှောက်လုံးမှာတန်ဖိုးပိုကောင်းလာအောင်ပြန်လုပ်ပါ၊ ဈေးနှုန်းနဲ့တန်ဖိုးကြားမှာမညီမျှမှုတွေရှိနေပါတယ် 75315 Imperial အလင်း Cruiser ၎င်းသည် Sequel Trilogy ချဉ်းကပ်မှုမှသယ်ဆောင်လာသောပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။
တစ် ဦး အဖြစ်က၎င်း၏တန်ရာအပေါ်အခြေခံသည် Lego အစုံ, ဝေဖန်ရန်အနည်းငယ်သာရှိပါတယ် 75315 Imperial အလင်း Cruiser အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အပြင်ပန်းအတွက် Imperial သင်္ဘောအသစ်၏ကောင်းမွန်သောပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုနှင့်အတွင်းပိုင်းအတွက် Mandalorian မှအဓိကဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုအနက်ဖွင့်ခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသေးစားပုံများသည်စုံလင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီး၎င်းတို့ထဲမှသုံးခု (ဒေါသတကြီးဖြင့်) ဒီအစုထဲသို့သော့ခတ်ထားသည်။
နညျးလမျးမြားစှာတှငျ, 75315 Imperial အလင်း Cruiser ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်စစ်မှန်ခြင်းတို့တွင်ဖြစ်နိုင်သည့်အကန့်အသတ်နှင့်နီးစပ်သည်city ပါဝင်သည် minifigures ၏အရေအတွက်နှင့်အရေအတွက်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်စျေးနှုန်းနှင့်ထပ်တူထပ်မျှမပြောနိုင်ပါ၊ ဈေးနှုန်းသည်တူညီသောကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအနည်းဆုံး ၃၀% အထိရှိသည်။
ကြောင်းပြissueနာမရှိရင်, ဒီမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည် 2021 နွေရာသီအကွာအဝေးအတွင်းအငြိမ့်ထိုင်လိမ့်မယ် Lego Star Wars အစုံပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျန်သူတွေအားလုံးနှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ထူးခြားသလဲ၊ 75315 Imperial အလင်း Cruiser မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်လျစ်လျူရှုခံရခြင်း၏အန္တရာယ်ရှိသည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Star Wars 75315 Imperial Light Cruiser?
အတူတကွထားရန်သုံးနာရီမှလေးနာရီအကြာကြာလိမ့်မည် 75315 Imperial အလင်း Cruiserနံပါတ်ကိုးအိတ်များတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Star Wars 75315 Imperial Light Cruiser?
1,336 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 75315 Imperial အလင်း CruiserBaby Yoda တစ် ဦး နှင့် Mandalorian၊ Cara Dune၊ Fennec Shand, Moff Gideon နှင့် Dark Trooper အပါအ ၀ င်အသေးစားဓာတ်ပုံ ၅ ခုပါဝင်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars 75315 Imperial Light Cruiser?
75315 Imperial အလင်း Cruiser ၅၈ စင်တီမီတာ၊ ၂၃ စင်တီမီတာကျယ်ပြီး ၁၃ စင်တီမီတာရှည်ပါတယ်။ အရွယ်အစားအနေဖြင့်၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ အတော်လေးလေးသောမော်ဒယ်ဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတံတားကိုလည်းသယ်ဆောင်သည့်လက်ကိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Star Wars 75315 Imperial Light Cruiser ကုန်ကျစရိတ်?
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်။ 75315 Imperial အလင်း Cruiser ယူကေတွင်ပေါင် ၁၄၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၅၉.၉၉ နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂမှယူရို ၁၅၉.၉၉ မှစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီဟာကဒုတိယဈေးအကြီးဆုံးပါ Lego Star Wars သာနောက်ကွယ်မှယခုအချိန်အထိ 2021 ၏အစုံ ၇၅၃၀၈ R75308-D2.
← အနာဂတ် LEGO Minecraft Minifigure ၏ဒီဇိုင်းကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်
ဒီအသစ် LEGO Star Wars အစုံကတကယ်လိုက်တယ်နာမည်ရှိတယ် →